စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တွေတိုးလာတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ - Cele Connections
စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တွေတိုးလာတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
ခင်ဝင့်ဝါကတော့ Miss တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူသိများကျော်ကြားခဲ့ပြီး အနုပညာလောကထဲကို ရောက်ရှိလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဖြူစင်ချောမွတ်တဲ့ အသားအရည်နဲ့ ဘာဘီရုပ်မလေးလိုလှပလွန်းတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ဆုတ်ကိုင်ထားနိုင်သူလေးပါ။ ခင်ဝင့်ဝါက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တခဲနက်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမက အခုလတ်တလော Mrtv-4မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ အကြင်နာမြစ်ဖျားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း အကောင်းဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
နာမည်ကျော်ကြားပြီး ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါတစ်ယောက် အနုပညာအလုပ်တွေကိုပဲ အားစိုက်လုပ်ကိုင်နေတာကြောင့် သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချစ်ရေးကို ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုလည်း ပရိသတ်တွေက သူမအနုပညာအလုပ်တွေစလုပ်စဉ်ကတည်းက အားကျခဲ့ကြတာပါ။ မကြာသေးခင်က မင်းသမီးချောလေးကတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ “စိတ်တွေချမ်းသာနေလို့ မဆိုသလောက်လေး ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်နေတာကို ၀လာတယ်နော်လို့ မပြောကြေး” …. လို့ မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ခင်ဝင့်ဝါတစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကြောင့် စိတ်ချမ်းသာနေလဲဆိုတာ သိချင်နေကြပါပြီ။
မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနေသူက ဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးက ခန့်မှန်းပေးကြပါဦးနော်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်လာတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
စိတျခမျြးသာမှုတှကွေောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျတှတေိုးလာတဲ့ ခငျဝငျ့ဝါ
ခငျဝငျ့ဝါကတော့ Miss တဈယောကျအနနေဲ့ လူသိမြားကြျောကွားခဲ့ပွီး အနုပညာလောကထဲကို ရောကျရှိလာသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ဖွူစငျခြောမှတျတဲ့ အသားအရညျနဲ့ ဘာဘီရုပျမလေးလိုလှပလှနျးတာကွောငျ့ ပုရိသတှရေဲ့ အသညျးနှလုံးကို ဆုတျကိုငျထားနိုငျသူလေးပါ။ ခငျဝငျ့ဝါက ရုပျရှငျဇာတျကားမြားမှာ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို တခဲနကျရရှိနတောဖွဈပါတယျ။ သူမက အခုလတျတလော Mrtv-4မှာ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ အကွငျနာမွဈဖြားရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး အကောငျးဆုံးပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါသေးတယျ။
နာမညျကြျောကွားပွီး ပရိသတျရဲ့ခဈြခငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ ခငျဝငျ့ဝါတဈယောကျ အနုပညာအလုပျတှကေိုပဲ အားစိုကျလုပျကိုငျနတောကွောငျ့ သူမနဲ့ပတျသကျတဲ့ အခဈြရေးကို ပရိသတျတှကေ စိတျဝငျစားနကွေပါသေးတယျ။ သူမရဲ့ သှယျလတြဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကိုလညျး ပရိသတျတှကေ သူမအနုပညာအလုပျတှစေလုပျစဉျကတညျးက အားကခြဲ့ကွတာပါ။ မကွာသေးခငျက မငျးသမီးခြောလေးကတော့ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာ “စိတျတှခေမျြးသာနလေို့ မဆိုသလောကျလေး ပွညျ့ပွညျ့လေးဖွဈနတောကို ဝလာတယျနျောလို့ မပွောကွေး” …. လို့ မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ ပရိသတျတှကေတော့ ခငျဝငျ့ဝါတဈယောကျ ဘယျသူ့ကွောငျ့ စိတျခမျြးသာနလေဲဆိုတာ သိခငျြနကွေပါပွီ။
မငျးသမီးခြောလေး ခငျဝငျ့ဝါကို စိတျခမျြးသာအောငျထားနသေူက ဘယျသူဖွဈနိုငျလဲဆိုတာ ပရိသတျကွီးက ခနျ့မှနျးပေးကွပါဦးနျော။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ပွညျ့ပွညျ့လေးဖွဈလာတဲ့ ခငျဝငျ့ဝါရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
“ဘဝထဲက ထွက်ခွာသွားတဲ့ ချစ်ရသူကြောင့် ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကို ရင်ဖွင့်လာသူ နီနီခင်ဇော်”
ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးရဲ့ (၆၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် ရည်စူးပြီး New York မြို့က မြန်မာဘုနးကြီးကျောင်းမှာ အလှူဒါနလေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
” သားဖြစ်သူ ဘုန်းမင်းနေလကို ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ထမင်းခွံ့ကျွေးနေကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် “